Soo dejisan AVS Video Editor 9.2.1.349 – Vessoft
WindowsMultimediaTifaftirayaasha warbaahintaAVS Video Editor
Bogga rasmiga ah: AVS Video Editor
AHV Video Editor – software ah si edit iyo ka arrinsashada video ah. software wuxuu taageeraa set oo ah qalab si u qabtaan hawlaha aasaasiga ah ee la files video of qaabab kala duwan. software wuxuu isticmaalaa badan oo saamaynta iyo filtarrada si ay u abuuraan videos ama duubey. AHV Video Editor waa inay awoodaan inay qabsadaan video ka tuners TV iyo kamaradaha video, badalo ku qaabab video, gubi DVD, geliyaan faylasha in video ah oo caan ah adeegyada martigelin, iwm software ka kooban yahay ka dhisay-in module si edit iyo qas tareenka. AHV Video Editor taageertaa caching gaar ah xogta siiya shaqada la dedejiyey la HD-video.
Taageerada qaabab kala duwan video
Rogida of saamaynta audio iyo video ah
Waxay abuurtaa ah movies iyo shows slide
tafatirka Dedejiyey of HD video
Qabsashada of video ka aaladaha dibadda
Soo dejisan AVS Video Editor
Faallo ku saabsan AVS Video Editor
AVS Video Editor Xirfadaha la xiriira
Desktop 4shared – softiweer si aad u soo dejiso ugana soo xajiso faylasha adeegga faylasha-wadaaga. Sidoo kale, codsigu wuxuu awood u siinayaa in si fudud loo maareeyo feylasha keydka daruuriga ah.